मुख्य समाचार – Boli Nepal
बुन्डेस लिगा – ओल्मो चम्कदा होफेनहेममाथि लाइप्जिगको सहज जित
एजेन्सी। आरबी लाइप्जिगले जर्मन बुन्डेस लिगामा होफेनहेममाथि २–० को जित हात पारेको छ । शुक्रबार राति भएको खेलमा ओल्मोले पहिलो हाफमा दुई मिनेटको अन्तरमा दुई गोल गर्न सफल भएको थियो…
थप बुन्डेस लिगा – ओल्मो चम्कदा होफेनहेममाथि लाइप्जिगको सहज जित
बुन्डेसलिगाको उपाधिबाट बायर्न म्युनिख एक जित टाढा
एजेन्सी। जर्मन बुन्डेसलिगाको उपाधिनजिक बायर्न म्युनिख पुग्न सफल भएको छ । शनिबार राति बोरुसिया मोन्चेनग्लाडवाकलाई २–१ ले हराउदै लगातार आठौं सिजन उपाधि नजिक पुगेको हो । २६औं मिनेटमा जिर्कजीको गोलमार्फत…
थप बुन्डेसलिगाको उपाधिबाट बायर्न म्युनिख एक जित टाढा
कस्तो अवस्थामा व्यायामले हानि पुर्याउछ स्वास्थ्यमा ?
कतिपय रोगबाट मुक्त गर्ने मात्र होइन, रोग लाग्नै नदिनका लागि व्यायाम अपरिहार्य एवं अनिवार्य मानिन्छ । तर, त्यही व्यायाम कतिपय अवस्थामा भने हानिकारक हुन सक्छ । उ चित ढंगले गरिने…
थप कस्तो अवस्थामा व्यायामले हानि पुर्याउछ स्वास्थ्यमा ?
शरीरकाे यो अंगबाट पनि कोरोनाको खतरा, नगरौँ वेवास्ता
कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएसँगै हर कोहीलाई मास्क लगाउन, हात धुन र सामाजि दूरी कायम गर्न लगाइएको छ । केही मानिसहरु सतहबाट बच्नको लागि ग्लोब्स पनि लगाइरहेका छन् । भाइरसबाट…
थप शरीरकाे यो अंगबाट पनि कोरोनाको खतरा, नगरौँ वेवास्ता